7 ဥရောပ၌ပိုက်ဆံကောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ >7ဥရောပ၌ပိုက်ဆံကောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ
ရှေးခေတ် အချစ်မြို့များ, ချစ်စရာကောင်းသောဥယျာဉ်များ, လှပသောရင်ပြင်များ, ဥရောပသို့ နေ့စဉ် သန်းနှင့်ချီသော ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်သည်။. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ခရီးသွားများသည် ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းနှင့် ကျက်သရေရှိမှုကို စူးစမ်းရန် ဥရောပသို့လာရောက်ကြပြီး နာမည်ကြီးဥရောပအထင်ကရနေရာများတွင် စမတ်ကျသောလှည့်ကွက်များဖြင့် ခါးပိုက်နှိုက်ခံရသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။. သင်၏အံ့သြဖွယ်ခရီးစဉ်တွင်ဥရောပ၌ဤအိတ်များကောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဤအချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လုံခြုံပါ.
1. ပိုက်ဆံအိတ်ကောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ: အန္တရာယ်ဇုန်များကိုသိပါ
မင်းဘယ်သွားနေလဲဆိုတာမင်းသိတာကမင်းဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ. ဒါကြောင့်, သင်၏အားလပ်ရက်ကိုအီတလီသို့မဟုတ်ပြင်သစ်၌စီစဉ်သောအခါ, မဖြစ်မနေသွားသင့်တဲ့နေရာတွေ၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာသင့်တယ်. စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး, မင်းအုပ်စုလိုက်တိုက်ပွဲမှာမင်းကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့် ဦး တည်ရာတိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်, ခရီးသွားများသည် ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများကို အထူးဂရုပြုရန်နှင့် ခါးပိုက်နှိုက်မှုများကို သတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။.
ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်သတိထားသင့်သောနေရာများ, သားငါးဈေးကဲ့သို့နေရာများဖြစ်ကြသည်, လူကြိုက်များသောရင်ပြင်များ, နှင့် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အစက်အပြောက်. ဤနေရာအားလုံး၌တူညီချက်မှာ၎င်းတို့သည်အလွန်စည်ကားသည်, ဒါကြောင့်မင်း Eiffel Tower (သို့) Milan Cathedral ကိုကြည့်နေစဉ်, ခါးပိုက်နှိုက်တွေကမင်းကိုအလွယ်တကူထိနိုင်တယ်, စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမင်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်သွားတယ်. မင်းရဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်နဲ့လူစုလူဝေးတွေကိုသတိထားဖို့ကဥရောပမှာခါးပိုက်နှိုက်တာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ထိပ်တန်းအချက်တစ်ခုပါ.
2. Pickpocketing နည်းလမ်းများနှင့်လိမ်လည်မှုများကိုလေ့လာပါ
လှပတဲ့သူစိမ်း (သို့) လှည့်ကွက်တွေပဲ2ဥရောပတွင်အဖြစ်အများဆုံး pickpocketing လိမ်လည်မှုများ. ဥရောပရှိမြို့တိုင်း၌မှော်နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အထင်ကရနေရာများရှိသကဲ့သို့၊, ဝိသေသလက္ခဏာများကောက်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်အတူတူပင်. ထိုကွောငျ့, မင်းရဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းထားချင်ရင်, သင့်ဦးတည်ရာရှိ မကြာခဏ ခါးပိုက်နှိုက်လှည့်ဖြားမှုများအတွက် ကြိုတင်လေ့လာပါ။.
ခါးပိုက်နှိုက်လိမ်လည်မှုများအတွက်နောက်ထပ်ဥပမာများမှာလှပသောသူစိမ်းသည်အချိန်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုတောင်းခံခြင်းဖြစ်သည်. မင်းရဲ့မြေပုံကိုစစ်ကြည့်နေရင်း, ဒါမှမဟုတ်ကြည့်, သူတို့ကအနီးကပ်လာပြီးမင်းရဲ့အိတ်ကပ် (သို့) အိတ်ထဲကဘယ်အရာကိုမဆိုဖမ်းယူပါ. ဒါကြောင့်, သတိရှိပါနှင့်ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုသို့မလိုက်ပါနှင့် 12 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှုများ.
ပါရီမှ လန်ဒန်သို့ ရထားဖြင့်
ရထားဖြင့် ဘရူဆဲလ်မှ လန်ဒန်သို့
3. ပိုက်ဆံအိတ်ကောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ: ဟိုတယ်တွင်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများထားခဲ့ပါ
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုချန်ထားခဲ့ပါ, credit ကဒ်များ, ဟိုတယ်လုံလုံခြုံခြုံရှိလက်ဝတ်ရတနာများသည်ဥရောပ၌ခါးပိုက်နှိုက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်. ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, ခါးပိုက်နှိုက်များသည် ခရီးသွားများသတိမပြုမိဘဲ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို မည်သည့်နေရာတွင် ရှာဖွေရမည်ကို အတိအကျသိနိုင်သော အရည်အချင်းတစ်ခုရှိသည်။. ထို့အပြင်, မင်းရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူကိုမင်းရဲ့အီးမေးလ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းမှာဒီနေ့ရနိုင်တယ်, သို့မဟုတ် အွန်လိုင်း ရှုခင်း လက်မှတ်များကို ဘွတ်ကင်လုပ်ပါ။, သင့်ငွေသား သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်များအားလုံးကို သယ်ဆောင်ရန် အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။.
ဒါကြောင့်, သင်မထွက်မီတစ် ဦး တည်း၌လှည့်လည်သွားပါ ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးခွေးလှေးစျေးများ, ငွေသားအချို့ကိုသာယူပါ. သင်၏အကြွေး ၀ ယ်ကတ်အားလုံးကိုသယ်ရန်လည်းအကြောင်းပြချက်မရှိ, ဒါပေမယ့်မင်းအခိုင်အမာပြောရင်, ငွေသားနှင့်ကတ်များကိုကွဲပြားသောအတွင်းပိုင်းအိတ်များသို့ဖြန့်ပါ ပိုက်ဆံခါးပတ်.
နွေရာသီနေ့များတွင်ပိုက်ဆံခါးပတ်များ (သို့) အတွင်းခံအင်္ကျီအိတ်များသည်သင်၏အဖိုးတန်ပစ္စည်းများလုံခြုံစိတ်ချရစေရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်အလွှာ ၀ တ်ထားသည့်အခါဤခရီးသွားလှည့်ကွက်သည်လွယ်ကူသည်, ဆောင်း ဦး သို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီတွင်ရာသီဥတုပူနွေးစိုစွတ်သောအခါအဆင်မပြေနိုင်ပါ.
အိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ခရီးစဉ်အတွင်းမည်သည့်ခရီးသွားခြင်း၊ အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွင်မဆိုငွေခါးပတ်များ ၀ ယ်နိုင်သည်, ဥပမာအားဖြင့်ဗဟိုမီးရထားဘူတာများသို့မဟုတ်လေဆိပ်များတွင်. အရာများကိုအတွင်းအိတ်များထဲတွင်ထားရှိခြင်း၏အားသာချက်မှာသိသာထင်ရှားသည်, pickpocketers တွေကမင်းကိုဝင်တိုက်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီအိတ်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးဘယ်တော့မှရောက်အောင်မသွားနိုင်ပါဘူး. ဒီလမ်း, သင်သည်ပျော်ရွှင်စွာလှည့်လည်။ ဥရောပ၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအထင်ကရနေရာများကိုစူးစမ်းရှာဖွေနိုင်သည်.
5. Cross-Body အိတ်ယူလာပါ, ကျောပိုးအိတ်မဟုတ်ပါ
ချစ်စရာကောင်းသောဥရောပလမ်းကြားများကိုလျှောက်လည်သောအခါ, Louvre သို့တန်းစီရပ်နေလျှင်သင်အဆင်ပြေသင့်သည်. ခရီးသွားရင်သက်တောင့်သက်သာရှိစေတဲ့ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်ဖို့ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ. ခန္ဓာကိုယ်အ ၀ တ်အိတ်သည်စိတ်ပူပန်မှုကင်းသောခရီးကိုဆိုလိုသည်, လူများသောတန်းစီခြင်းတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင့်အပေါ်၌ ပျံဝဲနေသလားကို သိရန် ပခုံးပေါ်မှ ကြည့်နေရန် မလိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။.
ထို့အပြင်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြတ်ကာအိတ်ထဲမှရေပုလင်း (သို့) ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသင်ယူနိုင်သည်. ဒါကြောင့်, ဥရောပတွင်ကြက်ခြေခတ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်ပိုင်းအိတ်ကိုယူလာခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, အလွယ်တကူ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ လည်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။.
6. ပိုက်ဆံအိတ်ကောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ: ဒေသခံတစ် ဦး ကဲ့သို့ ၀ တ်စားဆင်ယင်ပါ
ခရီးသွားတစ် ဦး အားကျွမ်းကျင်သောခါးပိုက်နှိုက်နေရာများသို့သွားစေသောအရာတစ်ခုမှာအလွန်ထူးခြားသောခရီးသွားဖက်ရှင်ဖြစ်သည်: အိတ်များ, အားကစားဝတ်စုံ, ခရီးသွားတစ် ဦး ကဲ့သို့သရုပ်ဆောင်သည်. ဘုရားကျောင်းများ, ရှေးဟောင်းရင်ပြင်များ, ဥရောပရှိအထင်ကရနေရာများစွာသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပြီးခရီးသွားအများစုသည်ရပ်ပြီးရိုးရိုးကြည့်နေကြသည်, သို့မဟုတ်ရာပေါင်းများစွာသောပုံများကိုရိုက်ပါ.
ဥရောပတွင်ခါးပိုက်နှိုက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကောင်းဆုံးအချက်မှာဒေသခံလူအုပ်နှင့်ပေါင်းစည်းရန်ဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, သင်၏ ခရီးသွားလာမည့်နေရာများတွင် သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာများကို ကြိုပြီးစစ်ဆေးပါ။, ဒေသခံခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုစစ်ဆေးပါ.
7. ပိုက်ဆံအိတ်ကောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ: ခရီးသွားအာမခံရှိသည်
ခရီးသွားအာမခံ ခရီးမထွက်ခင်မှာမရှိမဖြစ်. ယနေ့သင်သည်သင်၏အဖိုးတန်ပစ္စည်းများနှင့်အိတ်ကိုအာမခံထားနိုင်သည်, ပျောက်ဆုံးသွားလျှင် သို့မဟုတ် ဤကိစ္စတွင်သာ ဖြစ်သည်။, အခိုးခံရသည်. သင့်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် ကတ်များ အခိုးခံရပါက ခရီးသွားအာမခံသည် အသက်ကယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။, ကယ်ဆယ်မယ့်သူမရှိ တိုင်းတစ်ပါးမှာ.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, ခရီးသွားခြင်းသည်ယဉ်ကျေးမှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, နိုင်ငံများနှင့် အံ့သြဖွယ်အမြင်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။. ခရီးသွားအတွေ့အကြုံအများစုသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး ဥရောပတွင် ခရီးသွားများ ခါးပိုက်နှိုက်ခံရခြင်းကို ကြုံရခဲလှသည်။. သို့သျောလညျး, ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, ဥရောပ၌ခါးပိုက်နှိုက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးချက်များကိုလိုက်နာပါ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဥရောပရှိ မည်သည့်နေရာသို့မဆို ရထားဖြင့် လုံခြုံပြီး မမေ့နိုင်သော အားလပ်ရက်ကို သင့်အား စီစဉ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ဝမ်းမြောက်စွာ ကူညီပေးပါမည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပ၌ခါးပိုက်နှိုက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ” ကိုသင်၏ site ပေါ်တွင်ထည့်လိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/tips-avoid-pickpockets-europe/?lang=my ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ခါးပိုက်နှိုက်များကို ရှောင်ပါ။	Europetraveltips	ခါးပိုက်နှိုက်	လှည့်စားမှုများ	ခရီးသွားအကြံပြုချက်များ